ဗီဒီယိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ - ဘရာဇီးယိုချက်တင်-ေပ်ာ္လဲ-Papo!
ချင်လျှင်သင်ချိန်းတွေ့စတင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်းနိုင်ငံနယူးဇီလန်၏၊ထိုအခါသေချာအောင်အသိစိတ်၏အလုပ္ကိုင္မႈရွိပါတယ္။ သူတို့ကြိုးစားပေမယ့်ဘယ်တော့မှမအလုပ်အတွက်နှောင်းပိုင်းအတွက်တော့သူတို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ထက်ပိုမိုသူတို့ခုန်ကိုချစ်၊သူတို့ချစ်အားကစားနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ၊သူတို့ကိုမှအသေးငယ်ဆုံးမှအကြီးမားဆုံးနဲ့ဟောကျားမတန်းတူရေး။ နယူးဇီလန်နှင့်မိန်းကလေးများနှင့်အတူအမျိုးသမီးမိတ်ကပ်နှင့်ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ဝတ်၊သာညဦးယံ၌နာရီမတူဘဲရုရှား၊အကြားရေပန်းစားဒေသခံလူတန်းစားအပေါ် ဆယ်စုနှစ်အားဖြင့်။ သူတို့ထဲကအများစုဟ...
အဲလက်စ်နှင့်လန်အကြောင်းပြောနေတာ ထိုအင်္ဂါများ၏အသက်တာတွင်ဘရာဇီး၏ဘရာဇီးအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုဘရာဇီးနှင့်ဘရာဇီးမိန်းကလေးများ။ -(အဲလက်စ်)၊မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ဒီနေ့ထက်ပို။ လန်ဘရာဇီး၊သူသည်ဘဝအသက်တာတွင်ဘရာဇီးကတည်းကမွေးဖွားပြီးသူကအိမ်ထောင်သည်အဘရာဇီးမိန်းကလေး။ -(လန်)ဒါဟာအတွက်၊ကျနော်တို့အပေါ်မှာထိုင် ။ သတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးအုပ်စုတစ်စုကဖန်တီး၊နှင့်ငါ့အနာဂတ်မိန်းကလေးသင့်မှတ်ချက်၊နှင့်ကျွန်တော်သူမ၏ပြောသည်။ ခဏမှစ။ကျွန်တော်တို့စတင်ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဗမာနဲ့ပေါ်တူဂီသုံးပြီးအစီအစဉ်။ -(တြင္ေ)ပြီးတော့အား...
အတွက်ဖိလစ်ပိုင်အဆယ့်လေးနှစ်။ ချိန်းတွေ့အားလုံးအသက်အရွယ်။ န့်အသတ်။ ရီးရဲလ်ဓါတ်ပုံများ
ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်၊သင့်ဘဝလက်တွဲဖော်နှင့်အတူအဘယ်သူသင်တည်ဆောက်နိုင်ညွတ်သောဆက်ဆံရေး။ မဝင်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူလူ။ ဒါကြောင့်သာယူ။ အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အမျိုးသမီးများ-အကြီးဆုံးဒေတာဘေ့စ၏ပရိုဖိုင်း။ အမျိုးသားများထံမှကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများ၏ရုရှားနှင့်အခြားနိုင်ငံများအဘို့အရှာနေဖြစ်ကြောင်းအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ မလွန်ပါဘူးအားဖြင့်ကံကောင်း။ ရစုံတွဲများအဘို့သင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့တတ်၏။ ဒီအအတိအကျအဘယျသို့သူအဘို့အရှာဖွေနေ၊တစ်ဦးအဖြစ်။ ရုံခြေလှမ်းယူ။ အကာင္စီ:မှတ်ပုံတင်ဖို့ပြီးနောက်၊သင်ဖြည့်စွက်ရပါမ...
မထောင်ဦး။ သူမမချစ်ပါဘူး။ သင်တို့ကိုစုံစမ်းပြီအားလုံးအစဉ်အလာနည်းလမ်းတွေရှာတွေ့မှအထူးတစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ? သင်ငြီးငွေ့၏ဖိလစ်ပိုင်ဘားကလပ်မြင်ကွင်းများ၊အိမ်ပြန်လာမှတစ်ဦးအချည်းနှီးသောအိမ်တည်းကျောက်ပြားကိုအဘို့အရိုမန်း၊ဖိလစ်ပိုင်၊စားသောက်ဆိုင်များ၊ဆိုးရွားမျက်စိကန်းရက်စွဲများအားဖြင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊ဒေသခံဖိလစ်ပိုင်တစ်ဦးတစ်ယောက်အုပ်စု၊တချွတ်အဖြစ်အပျက်များနှင့်အစည်းအဝေးအဘယ်သူမျှမရရှိနိုင်ပါရန်? ချိတ်ဆက်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ ရှာဖွေမိတ်ဆွေတွေ...
အတွက်တွေ့ဆုံရန်။ ချိန်းတွေ့များအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ ရီးရဲလ်ရုပ်ပုံများ
ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်ကမ်းလှမ်းသင်၏တစ်ခုဖြစ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်း၏ချိန်းတွေ့မှတဆင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး။ အပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အဘို့အရှာဖွေနေချိန်းတွေ့၊တစ်ဦးထက်ပိုသန်းလူ၊ထိုသူတို့အထဲမှအများအပြားတထောင်အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့ချက်တင်အချိန်တွင်။ သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်အပြေးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ဖတ်ဟာသနှင့်ရယ်စရာပုံပြင်များ၊ရယ်ရယ်စရာရုပ်ပုံများအပိုင်းမှာ'ဟာသ'၊ပွင့်လင်းပုဂ္ဂလိကစကားပြောခန်း၊ကစားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တွေနဲ့၊အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊သင်တွေ့ဆုံရန်။ ဆောင်ရွက်ထိပ်နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်...
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အမြားဖြစ်လာကြပြီ၊အပါအဝင်အီတလီနိုင်ငံ။ ရှာဖွေတစ်ဦးချစ်စရာကောင်လေးကအသောက်အတွက်မိနစ်လွယ်ကူသော၊ရန်လှပသောအချစ်ဇာတ်လမ်း၊နှင့်တွေ့ဆုံရန်တစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ပင်လက်ထပ်။ ဤစုဆောင်းခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့စုဆောင်းထားသောလူကြိုက်အများဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုအလုပ်အတွက်အခြားနိုင်ငံများ။ အလေးအနက်နှင့်ဂုဏ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ဒီဇိုင်းလူလတ်ပိုင်းနှစ်။ စနစ်ချိန်းတွေ့ခွင့်ပြုတယ်ရှာတွေ့မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူအဘယ်သူသင်အကိုက်ညီ။ အားဖြင့်မှတ်ပုံတင်...
ငါနေဆဲအောက်မေ့သတိရငါ၏ပထမဦးဆုံးညဥ့်အခါ၌အနီအခါအကြောင်းမသိချင်ပြုံးများ၏ဒေသခံဖိလစ်ပိုင်မိန်းကလေးများအခါ၊ငါသည်အလင်း၌။ ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးများမှာအလွန်စပ်စုနှင့်အရှက်ကအနက္ေရာင္။ အများကြီးရှိပါတယ်အပေါ်ဖိအားဒေသခံအမျိုးသမီးကိုလိုက်လျောညီထွေနှင့်အဘယ်သို့ပြုလူ့အဖွဲ့အစည်းပြောပါတယ်။ များစွာသောဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးများကိုဆွဲဆောင်ဖို့အနက်ရောင်အမျိုးသားများ၊ဒါပေမဲ့သူတို့ကြောက်လန့်ဖြစ်ခြင်းအရှက်ခြင်းအားဖြင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ အနက္ေရာင္ယောက်ျားအဖြစ်ရှုမြင်ရန်လိုခြိမ်းခြောက်မှု၊နှင့်များစွာသောပိုလန်မိန်းကလေး...
နှင့်အတူကြီးမားသောအသံုးျပဳသူမ်ား၏တစ်ဦးထက်ပိုသန်းလူ(နှင့်ဤပုံသည်အဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာ)နှင့်ဂတိတော်မှသင်မိတ်ဆက်ဖို့လှပသောဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ၊ဒီအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ဦးတစ်မတ်ေတာအတှကျရှာဖွေနေ၊ချိန်းတွေ့၊အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး-နှင့်ဖြစ်ကောင်းသင်ဖြည့်ဆည်းကြလိမ့်မည်သင့်အသက်တာ၏မေတ္တာကို။ နှင့်အတူမိုဘိုင်းအက်ပ်တွင်၊သင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အကောင့်သစ်နှင့်စတင်ရေးသားခြင်းသင်၏မေတ္တာဇာတ်လမ်းအတွက်မိနစ်။ ဒီအာရှချိန်းတွေ့အက္ပ္ကိုဘို့အသည်စုံလင်သည်ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့နှင့်အလွန်ကြီး...
အဲဒီအတွက်ခေတ်မီအကြိမ်အဘို့ရှာဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်ပိုလန်မိန်းကလေးများလည်းပြုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အားဖြင့်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဝင်ရောက်အချို့ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဗီယက်နမ်သို့မဟုတ်လူမှုကွန်ယက်များ၊အတူအိပ္ရင္ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီး။ အားလုံးနီးပါး မိန်းကလေးငယ်များယနေ့အွန်လိုင်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကောင်းတစ်ဦးကိုရှာဖွေဖိလစ်ပိုင် အမျိုးသမီးနေထိုင်သောသူတစ်ဦးတထောင်မိုင်အပိုင္၊သူမ၏အဘို့အကြည့်ဒီမှာ။ သုံးပြုခြင်းသင့်ကွန်ပျူတာအကြောင်းအရာ၊ဆေးပြား၊အိ...
ဝန်ဆောင်မှုဗီဒီယိုချိန်းတွေ့သင်ကူညီလိမ့်မည်ရှာဖွေမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်ကောင်မလေးနဲ့။ အဆိုပါစနစ်အလိုအလျောက်ရွေးသင်တို့အဘို့အအဖော်သို့မဟုတ်ကျပန်းအပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့ရှေးကော။ သင်မြင်နှင့်အကြားအ ၊အ မြင်နှင့်အကြား။ သင်သည်လည်း ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်စာသား။ အဓိကအစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ပုံမှသင်တန်းသားများကို၏ဗီဒီယိုကိုချိန်းတွေ့အကြောင်းအခုအွန်လိုင်း။ သင်၏တဦးတည်းရွေးချယ်သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ရန်။ သင်သည်လည်း"ကိုရှာဖွေတစ်ဦးကိုကျပန်းဗီဒီယိုတွဲဖော်"ရန်စတင်တွေ့ကြုံ။ ပါကကျေးဇူးပြုပြီးထိုဝန်ဆ...
ငါရှာနေတာပါအဘို့အညာဘက်ကိုလူတစ်ဦးအချို့သောအချိန်နှင့်နေရာအရပ်။ သူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်အဆင်သင့်အခြေချနဲ့စတင်ပြီးပြည့်စုံသောမိသားစုများနှင့်အတူ။"ငါအဟောင်းကြီးထွားဖို့သင်တို့နှင့်အတူ"သူတစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ လက်ခံရန်အဆင်သင့်အတွက်ငါ့ကိုအဘယ်သူသည်ငါဖြစ်၏၊မကြောက်မျှဝေဖို့ငါ့အသက်ကိုတက်နှင့်အဆင်းရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အချိန်အများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့။ ဆူး ၊သိသူ၊ဘဝကသိပ်တိုတောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကစားရန်။ ငါဖြစ်တဲ့ ကနေဖိလစ်ပိုင်။ ကျွန်မပြောနိုင်တာတစ်ခုကောင်း။ ငါတူလမ်းလျှောက်ခံစားသဘာဝတအိတ်အတ...
မက်ဒရစ်ကနေအများကြီးရှိပါတယ်၊မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။ ကိုကောင်းစွာအခြားမျိုးစိတ်များ၊ဆက်သွယ်ရေး၏မရှိခြင်း:သူတို့ကအများအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမရှိရာ၏၊ယိုချက်တင်အကြီးဆုံးဗီဒီယိုစကားပြောရုံသူတို့အဘို့။ အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အတော်လေးလူကြိုက်များ၊ထိုပြည်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အပြုံး:အကိုရှာတွေ့မှစံပြဖြစ်စိတ်ဝင်စားစရာ ။ အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုချက်တင်ကစားတဲ့၏ဇတ္စတန္ဂ်ာမဏီ၊ဘရာဇီး သည်။ သာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရအထီးကျန်ပြီးသားအကျွမ်းတဝင်နှင့်အတူအသီးအသီးအခြားအတွေ့အကြုံသစ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အသိအကျွမ်းများ၊သင်မည်သည့်။ သင...
ဆိုရင်ကျနော်တို့မှာကြည့်ရှု၏အကြီးဆုံးငါးတာနေရှင်နယ်အလှအပကိုစိန္လင္း(ခိုင္သင္းၾကည္၊ခ်စ္သူ၊ပီေက၊နိုင်ငံတကာအလှမယ်)၊ထိုအခါအလှဆုံးအမျိုးသမီးအပေါ်ဂြိုဟ်၊အမည်အားလုံးဤငါးစိန္လင္း၊ဘယ်တော့မှအရာအရပျကိုယူ။ အောင်မြင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်များ၏အသွင်အပြင်၊ပေါင်းစပ်အဝိသေသလက္ခဏာများ၏လီးယန်း၊ကော့ကေးနှင့်ဖောက်။ များစွာသောအမေရိကန်၊ကနေဒါ၊သို့မဟုတ်ဥရောပတိုက်မှကြိုက်တတ်တဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားအားလုံးအာရှ၊သာဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့၏အလှအပ၊ဒါပေမယ့်လည်းမရှိခြင်း၏ဘာသာစကားတစ်ခုအဆီးအတား(အပိုင္၊လူတိုင်းန...
သငျသညျတွေ့ခဲ့ရပါတယ်စုံတွဲများနှင့်မိတ်ဆွေများ၊ကြားရ။ လျှင်ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးအတူမေတ္တာ၌ကျရောက်၊နိုင်ငံခြားသူမဖြစ်နိုင်ပေသည်တစ်ဦးတည်းသာအကြောင်းပြချက်။ ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးယေဘုယျအားဖြင့်ထူးခြားသောနှင့်ချိုရိုက်များကိုအဘယ်သူမျှမဖြစ်စေ၊နိုင်ငံခြားသို့မဟုတ်ဇာတိ၊ခုခံတွန်းလှန်။ သူတို့လူသိများနေသောများအတွက်မိမိတို့အစောင့်ရှောက်မှု၊စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အနုမောဒနာ။ အများဆုံးများအတွက်ဖိလစ်မိန်းကလေးများဖြစ်ပါသည်၊မေတ္တာကိုအခြေခံအကျဆုံးသောဒြပ်စင်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး၏။ လူအများစုမဟုတ်ဘူးအတူမေတ္တာ၌လဲကျရေတ...
မင့်ခြင်းအကြောင်းလိင်သို့မဟုတ်ပျင်းစရာဖိလစ်ပိုင်၊ဒါပေမယ့်အများအပြားနိုင်ငံခြားနေ့ခေတ်ပဲကြိုးစားချင်လိင်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ။ နှင့်ဖိလစ်ပိုင်နှင့်အတူ၊ထိုင်းနိုင်ငံတွင်၊အကောင်းဆုံးနေရာဒီလိုလုပ်ဖို့၊သာဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ်ကြောင့်သူတို့ကို၏၊ဒါပေမယ့်လည်းကြောင့်အတော်လေးစျေးပေါရောက်စေဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဤသည်စိတ်ကူးသက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်။ လည်း၊အဘယ်သူမျှမသံသယရှိပါတယ်အများအပြားဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးတွေမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုအောင်၊တစ်ခါတစ်ရံသင်ထင်လျှင်သူမသည်လွန...
အုပ်စုအထီးကျန်သလိုတွေ့ဆုံရန်။ ကြံစည်မှုပြင်ဝီကီစာသားလော်များအတွက်သုံးနှစ်လေးဆယ်၊ဒါပေမယ့်သူမကနေဆဲတယောက်တည်း။ အဆိုပါနေ့ကကြွလာသောအခါသူမကမြောင်းနှင့်ဆွဲထားမြို့ပတ်ပတ်လည်ကြေညာချက်"အထီးကျန်သလိုဖြည့်ဆည်းရန်။"ဤအတန်ငယ်နုံခၚတုံ့ပြန်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးလူအသက္ကို။ အရှုံးသမား၊အရက်သမား၊အဟောင်းဆပ်ကပ်သဘင်၊အခုပဲမဲ့ချစ်သူများ။ သို့သော်၊ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောလူတို့အဆုံး၌တွေ့တစ်ဘုံဘာသာစကား။
စတင်ဖို့ချင်တယ်အသစ်အသွင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူဆွဲဆောင်မှုမိန်းကလေး၊ပြီးတော့မှပေါ်ဝင်ဖို့ဝက်ဘ်ဆိုက်အတူပဲ။။။။ သင်တို့အဘို့အရရှိနိုင်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်ပါးအွန်လိုင်းအခမဲ့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့၊ဒီနေ့တွေ့ဆုံပြီးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရှိသည်စိတ်ခံစားမှု၏အသွင်ဖွဲ့တွေ၊အစည်းအဝေးနှင့်လည်ပတ်။ မှတ်ပုံတင်ရန်အခုအချိန်မှာစတင်အွန်လိုင်းသွင်ချိန်းတွေ့များအတွက်လူကြိုက်အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ အခုအချိန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်အွန်လိုင်းသွင်-။ ရတောက်ပတဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်မေ့နိုင်သောအတ...
ဒီနေရာမှာသင်သင်ယူပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူတွေ့တဲ့မိန်းကလေး။ သင်ဖတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းစာအုပ်နှင့်နှစ်ပေါင်းသန်း။ စတင်ဖို့သင်နိုင်ပါတယ်။ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ-အကောင်းဆုံးနေရာအတွက်ချိန်းတွေ့နှင့်အတူ။ဟုတ်ကဲ့၊၏သင်တန်းကိုသင်တွေ့ဆုံအမျိုးသမီးအမျိုးမျိုးနှင့်မမျှော်လင့်တဲ့နေရာများ:လမ်းပေါ်မှာအတွက်၊တစ်ဖီး၊သို့မဟုတ်မှာလိုင်းစတိုးဆိုင်မှာ။ ဒါပေမယ့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်လျှင်ကျွမ်း၊ထိုသို့ပြုဖို့အကြံပြု၊သင်မကြာခဏသွားမှတိုးမြှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေ။ သုံးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များမျိုးသ...
တစ်ဦးရှိပါတယ်မှိုင်းသောအထူးသဖြင့်မကြာခဏကြားရတဲ့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်:ဆင်းရဲသောသူ၊ နှင့်ရိုးရှင်း။ ဒီအကယ့်ကိုစစ်မှန်တဲ့? အခါဟောပြောဖို့ဘယ်တော့မှသူတစ်စုံတစ်ယောက်မှအရှေ့တောင်အာရှ၊ငါသည်အထူးသဖြင့်မကြာခဏကြားအမြင်မှိုင်း:ဒေသခံအမျိုးသမီးများမှာဆင်းရဲ နှင့်ရိုးရှင်း။ ဒီစေခြင်းငှါ၊နည်းနည်းတှငျစစျမှနိုင်ငံကဲ့သို့မြန်မာနှင့်ကမ္ဘောဒီးယား။ အဲဒီနေရာတွေဟာပျက်အားဖြင့်စစ်တိုက်ခြင်း၊နှင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်း၏လူအသိသာဖြစ်ပါသည်ထက်အများကြီးနိမ့်အတွက်ပျမ်းမျှ။ သို့သော်အမှန်တရားအကြောင်းဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးအများကြီးပိုန...
ရောင်စုံဘရာဇီးနှစ်စဉ်ဆွဲဆောင်များအပြားနှစ်ထောင်ခရီးကမ္ဘာအနှံ့မှ။ ကည၊ကခုန်၊ကြွင်းသောအတက်ကြွစွာ။ ဒီမှာချက်ပြုတ်အများဆုံးအရသာကော်ဖီနှင့်နိုင် သင်တို့မပြောနိုင်ပါဘူးတစ်ခုတည်းခရီးပေမယ့်၊ဒေသခံတွေမကြိုက်ဘူး၊သူတို့ကြိုက်တတ်တဲ့အတူကအစားထိုးကိုး။ လူအနည်းငယ်ကသာသိ၏မြို့တော်ဘရာဇီးအတွက်ညအချိန်ဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်းခွင့်အမောင်းအားဖြင့်အနီရောင်ယာဉ်အသွားအလာအလင်းသည်၊ဒါကြောင့်သတိပြုရကြမည်ျဖတ္ကူးတဲ့အခါလူသွားလူကူး။ ဤအုပ်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက်တိုးအန္တရာယ်များလုယက်။ တန်ဖိုးရှိလာမှာအားလပ်ရက်အပေါ်တွေအများကြီးရသာယာသောအ...
အဆင်သင့်ရ။ ကိုယ့်အဖြစ်များအတွက်ပြင်ဆင်နေကြတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲ:အကောင့်သို့ယူအပေါငျးတို့ကအသေးစိတ်နှင့်လွဲချော်ကြပါဘူးတောင်မှအနည်းငယ်အမှုအရာ။ အဓိကအရာမမင်းဖို့ဖြစ်တယ်။ သုံးစွဲဖို့ကြိုးစားလျော့နည်းအောင်၊သန့်ဖယ်တရားဝင်စားဆင်ယင်များအတွက်စစ်မှန်သောအစည်းအဝေး။ လည်း၊မ ရုပ္ပုံမ်ားရင်ဘတ်။ သင်တို့ကိုအကြည့်ဖို့လိုအပ်ကောင်း၊မ ။ နောက်ဖြစ်ဟန်နိုင် အ ပြီးသူ့အမှားကိုအကြောင်းစိတ်ကူး။ မေးခွန်းများမေး။ ဒါကြောင့်မြေားအချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊အမေးအဖြစ်အများအပြားမေးခွန်းတွေအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ ဒီခွင...
သန်းတစ်ဝက်လူတွေနေ့တိုင်းရောက်အဘရာဇီးချက်တင်ကစားတဲ့။ နှင့်ဤသည်အဖြစ်ကောင်းလူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်ကျယ်ပြန့်သာဘရာဇီး၏ဒါပေမယ့်တစ်ခုလုံးကိုယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု။ ပေါ်တွင်နှိပ်ပါအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်နှင့်အလိုလိုတက်ခူးလိမ့်မည်။ သင်သည်မကျင့်လျှင်တူခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးမှတ်ပုံတင်ဖို့ထားခဲ့ကြောင်းကိုယ်တိုင်ကမည်သည့်အချက်အလက်၊ချက်တင်လုံးဝအမည်မသိနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေလျက်ရှိကြောင်းရဲ့အဓိကအင်္ဂါ ဖန်ဆင်းကစားတဲ့ဒါကြောင့်လူကြိုက်များ။ သင်အလွယ်တကူသိကျွမ်...
ချိန်းတွေ့ကမ်ဗီဒီယိုစကားပြောခန်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်ကြီးမားသောအရေအယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများချင်သောသူတစ်ဦးအိမ်ထောင်ဖက်ရှာတွေ့မှသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေကောင်း။ ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာ:ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ချိန်းတွေ့သုံးကမ်၊အင်တာနက်ချိန်းတွေ့၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊အွန်လိုင်းချက်တင်။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုချက်တင်စကားပြောဆိုချက်တင်စကားပြောဆိုမှုအခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်အတွက်ချိန်းတွေ့နှင့်လူမှုရေး။ ချိန်းတွေ့အားဖြင့်အင်တာနက်နှင...
နှင့်အတူနှစ်ဆယ်-ခြောက်နှစ်နိုဝင်ဘာဗီဒီယိုချက်တင်။ ရွေ့လျားအသစ်တစ်ခုဒိုမိန်းအခုတော့အမည်တွင်တည်ရှိပြီး:။ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲသာအကျိုးသက်ရောက်မှုအပြုသဘော၏အဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု။ ရွေ့လျားအတွက်အောက်ပါအားသာချက်များ:ချက်တင်ကစားတဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်မှာထင်ရှားမွတ္တိုင္:ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံုုးခ်မှတ်ပုံတင်ထားတသန်းအသုံးပြုသူများ။ ယခုက်ပ္ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြောင့်အပိုအတွက် သစ်လူ၊ပိုပြီးဖွယ်ရှိတွေ့ဆုံရန်ဖို့အတွက်စကားပြော စိတ်ဝင်စားစရာ။ ယခုသင်မှတ်တမ်းတင်ဗွီဒီယိုတစ်ခုသော...
ယခုငါသည်အိပ်ပျော်နှင့်အတူပင်ပိုပြီးဖိလစ်မိန်းကလေးများ(အဖြစ်ဝေးကျနော်မှတ်မိ)နံနက်ချိန်းတွေ့အ မလေးသူအဖြစ်သာလူသိများသည်သူ့အဘို့အလှအပနှင့်ပင်အရေးအကြောင်းစာအုပ်အတွက်ငါ့အချိန်အပိုင္။ ငါရဲ့စဉ်းစားဖို့အချိန်မျှဝေသင့်ရဲ့မဟာဗျူဟာများနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အတူ ၊ကမ္ဘာ၏စာဖတ်သူများအပေါ်မည်သို့သွေးဆောင်ဖြားယောင်းရန်ဖိလစ်မိန်းကလေးများ။ ဖိလစ်မိန်းကလေးများဖြစ်လေ့သေးစားနှင့်ပါးလွှာသော။ မကြာသေးမီက၊ငါသတိထားမိခဲ့ကြကြောင်းအချို့မိန်းကလေးများတစ်ဦးအသေးအစာအိမ်၊ဒါပေမဲ့သူတို့ယေဘုယျအားပါးပါး (အထူးသဖြင့်ကနေလာလ...
Qadınlar axtarır kişilər Filippin tanışlıq üçün İnternet vasitəsilə tanışlıq qızlar
၁၈ မပါဘဲဗီဒီယိုချက်တင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုစကားပြောချိန်းတွေ့ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း တွေ့ဆုံရန်ဖို့ကောင်လေး ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ နှစ် ပထမအတွက်ဗီဒီယိုနိဒါန်း အြန္လိုင္း ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မိန်းကလေးများ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ဝဘ်ချက်တင်ကစားတဲ့
© 2021 ဘရာဇီးယိုချက်တင်-ေပ်ာ္လဲ-Papo!